Ezi Afọ Ọhụrụ - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2020
Ike elu a VJ Drop na-enyere aka n'ime afọ ọhụrụ ahụ! Izu okè iji wuo hype tupu elekere ahụ etiwapụrụ 12. A na-akpọpụta ma na-emepụta nke ọma, na ndịna-esere na-eso. Akwụsịla bọl, dozie hyp. Mee ya afọ a na VJ Drops ndị a!
SKU: VJ Drop - Afọ Ọhụrụ Ọṅụ Category: Specials Products